Toriteny 17 Novambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 17 Novambra 2013
Ny Lioka 14 : 15 no anompanantsika ny fampianarana amin’ity anio ity. Mitantara indrindra ny amin’ny fampakaram-badin’ny zanak’ondry. Efa 2000 taona talohan’izao ny fanasan’Andriamanitra no efa mandeha ary ankehitriny izao dia anisan’ny voaasa amin’izany izaho sy ianao ; koa mifalia manokana amin’ity andro anio ity fa nasaina ianao ka tonga.
1- Fa nahoana no misy mandà ?
Tsara ny mampahafantatra fa ny fanasana ny amin’ny fampakaram-bady dia fanasana ny olona rehetra tsy an-kanavaka hiditra amin’ny Fiainana mandrakizay, ilay fiainana feno fahasambarana sy fahatsarana tsy misy toa azy [feno volamena , vatosoa , famirapiratana, fifaliana , fiadanana ] ary ny atao any dia fiderana an’Andriamanitra rano iray. Fa nahoana moa ny olona no mandà ? Ary ahoana no mety ho endrik’ilay fandavana ?
Mandà anefa ny sasany satria tsy noana sady tsy mangetaheta izany izy, misy koa ny mahatsapa fa efa ampy hampiadana azy ny zavatra misy eo an-tanany (vola , voninahitra, sns…) ka tsy te hiraharaha intsony izany fanasana ho amin’ny fianana mandrakizay izany. Na tsy mandà avy hatrany kosa aza ny sasany, dia mahita fialana kely foana izay ataony amin’ny sarin-teny samihafa “Hijery ny tany vao novidiako , ny ombiko, sns…, izany hoe ny asa aman-draharaha , ny fahasahiranana sy ny fiahiana momba izao fiainana izao … ”. Mahatezitra ny tompon’ny fanasana izany ka nahatonga azy hiantso ny olona rehetra eny an-dalam-be.
2- Misy ny tonga tao amin’ny fanasana nefa nolavina ?
Tsy misy fanavahana ny fiantsoana ny olona rehetra te hiditra amin’ny fanasana, nefa nisy olona tsy niakanjo akanjo fanasana amin’ny fampakaram-bady [rongony fotsy madinika], ny sasany notolorana ny fitafiana dia nety nandray ary nitafy izany, fa ny tsy nety niakanjo izany kosa dia ireo izay mirehareha sy mihevi-tena ho efa ampoky ny fahatsarana izy ary mendrika ho amin’ny fanasan ny fitafianay. Ny hevitr’io akanjo fotsy io dia fanaronam-pahotana, mila mitafy an’I Jesoa Kristy ny olona rehetra izay vonona hanaiky ny fansana ho amin’ny fampakaram-bady, samy manana ny fahalemena ara-panahy ny olona tsirairay ary tsy misy mendrika hanatrika ny fanasana ; nefa izay manaiky mandray an’I Jesoa ho fitafiany kosa, dia mitafy fahamarinana, fahamasinana, toe-panahy araka an’Andriamanitra ; dia ekeny hiditra sy hifaly ao amin’izany fanasana ho amin’ny fiainana mandrakizay izany.
Fitiavan’Andriamanitra ahy sy anao no mbola andrenesantsika fa mampanantena fahasambarana ho antsika Izy. Hoy Jesoa: “Andeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, ary ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no itoeranao koa” Jao 14:3 , raha te hahita fifaliana sy fahasambarana dia mila manaiky handray an’I Jeso Kristy ho fitafiana, ho fiainana, ho Tompo sy Mpamonjy. Ny fanasana ho amin’ny fiainana mnadrakizay efa vonona fa anjaranao sisa no misafidy na handà na hanaiky .
RAMAMONJIARISOA Bakolimalala, Diakona
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 22 novembre 2013